स्पाइनल osteochondrosis लागि चिकित्सकीय अभ्यास
Osteochondrosis उपास्थि को कामकाज को एक जटिल अवरोध छ। रोग कुनै पनि संयुक्त मा पूर्ण विकास गर्न सक्षम छ, तर सबै भन्दा अक्सर intervertebral डिस्क को lesion हुन्छ। यो विकृति एकदम जनसंख्यामा व्यापक छ र यो डिस्क को गंभीर Thinning को रूप मा व्यक्त छ नसाहरू उल्लङ्घन गर्दै पैदा र त्यहाँ तीव्रता बदलिने को स्थानीयकृत दुखाइ छ। प्रायजसो, रोग यो बिन्दु मा vertebrae मा अधिकतम लोड छ भएकोले कटि क्षेत्र समेट्छ। दुर्भाग्यवश, आधुनिक चिकित्सा अझै पुनर्स्थापना गर्न कुनै तरिका फेला परेन छ , उपास्थि osteochondrosis मा मेरुदण्ड लागि अभ्यास यति वस्तुतः सबै दुखाइ र बेचैनी हटाउन समावेश।
मुख्य बेचैनी कारण - नजिकैको कारण, डिस्क विस्थापन आन्दोलन लागि जिम्मेवार को नसाहरू थिचिएको छन्। यसरी, दुखाइ मात्र होइन vertebrae को क्षेत्र अवलोकन गर्न सकिन्छ, तर पनि चरम गर्न विस्तार गर्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो लक डिस्क गहिरो फिर्ता मांसपेशिहरु छन्, त्यसैले मुख्य व्यायाम को मेरुदण्ड को osteochondrosis यो विशेष क्षेत्र बलियो उद्देश्य हुनुपर्छ। साथै, बल प्रशिक्षण गर्ने क्याल्सियम को कंकाल को हड्डी मा, जोइन्टहरूमा मा थप विनाशकारी प्रक्रिया रोकेको ढिलाइ हुनेछ। तपाईं कटि को osteochondrosis संग को निदान गरिएको छ भने मेरुदण्ड, प्रयोगले गर्नुपर्छ मात्र दुखाइ को लापता पछि। रोग को तीव्र चरण मा supine स्थिति कक्षाहरू सुरु गर्न राम्रो छ, र शारीरिक सुधार रूपमा एक कुर्सी बसेर वा खडा गर्दा तिनीहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ।
को मेरुदण्ड लागि अभ्यास osteochondrosis मा
1. तपाईँको हात आफ्नो पक्ष मा, माथि, त्यसपछि झुकेको घुँडा, ढिलो मा, तल्ला बन्द आफ्नो खुट्टा लिएर छैन सास फेर्न ठाँउ Palms। कोहनी विरुद्ध आराम र पाखुरा जुटाउने प्रयास दुवै पक्षले। तपाईं Exhale रूपमा, बिस्तारै माथि दिन एकै समयमा आफ्नो खुट्टा सीधा। आराम, त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो टाउको बारी, पहिलो, त्यसपछि दायाँ बायाँ। osteochondrosis नम्र मा मेरुदण्ड लागि यी अभ्यास प्रदर्शन।
2. काँध चौडाई अलग, आफ्नो खुट्टा संग खडा सास लिनु र टाउको र बायाँ खुट्टा दायाँ बारी, र तिनीहरूलाई भुइँमा राखे। तपाईं Exhale रूपमा, टाउको बायाँ र दायाँ खुट्टा बारी र व्यायाम पूर्ण बायाँ खुट्टा को खुट्टाको औंलासम्म आफ्नो दायाँ एडी दोहोरिन।
inhaling गर्दा 3. बेन्ड आफ्नो घुँडा, दायाँ बायाँ र टाउको तिनीहरूलाई बारी। Exhaling मात्र फरक दिशा मा, एउटै कुरा गर्छन्।
4 आफ्नो पछाडि झूठ, त्यसपछि घुँडा आफ्नो खुट्टा मोड र पेट तिनीहरूलाई पुल, तपाईंको टाउको मा आफ्नो हात राख्न। यो स्थितिमा, तपाईं, केहि सेकेन्ड मा लक गर्न त स्थिति सुरु फर्कन आवश्यक छ। तपाईं यसलाई हार्ड, पूर्ण मा osteochondrosis मा मेरुदण्ड लागि यी अभ्यास गर्न पाउन भने, केवल एकांतर को खुट्टा मोड गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
को काँध, घाँटी र एडी लिफ्ट मा 5.Oboprites तल्ला बन्द श्रोणि र, यो स्थिति, आठ सेकेन्ड मा पकड त्यसपछि आराम र खोलन बाहिर द्वीपसमूह प्रयास गर्नुहोस्, र फेरि एक हुँदा पछि, अघिल्लो कदम दोहोर्याउनुहोस्।
सास हेर्दै गर्दा फिर्ता को osteochondrosis मा मेरुदण्ड शारीरिक प्रशिक्षण, बिस्तारै प्रदर्शन हुनु पर्छ र कुनै पनि अचानक आन्दोलनहरु बनाउन छैन याद गर्नुहोस्। आफ्नो राम्रो-जा सुन्न प्रयास गर्न निश्चित हुनुहोस्, र, प्रकाश व्यायाम गर्न बिस्तारै शक्ति उत्प्रेरित accustomed छन्।
वोदका को अदुवा tincture: नुस्खा, अनुप्रयोग सुविधाहरू, लाभ र समीक्षा
ओखर: पुरुषहरु को लागि लाभ र हानि। परम्परागत चिकित्सा को व्यञ्जनहरु
औषध "साइबेरियन स्वास्थ्य।" उत्पादन समीक्षा
Cerebrovascular लोक उपचार बलियो र शुद्ध पार्ने
घर मा उपचार: तपाईं एक मस्सा छन्
Sabelnik: बिरुवाहरु को औषधीय गुण
जीवनी जेट ली: कास्ट मा मार्शल आर्ट को मास्टर?
एक मान्छे कसरी आकर्षित गर्ने? व्यावहारिक सल्लाह
रूपमा रातो मरिच कपाल को tincture प्रयोग?
कार्यकारी शक्ति को सिस्टम: अवधारणा र रूसी को रूपरेखा
को "मेगा", नोवोसिबिर्स्क मा सबै भन्दा लोकप्रिय पसलहरूमा
जीवनी Kirill Safonov र व्यक्तिगत जीवन
गाजर: तस्विरको साथ फोटो
यसलाई कसरी पोशाक को एक स्केच आकर्षित गर्न सिक्न समय
भिक्टोरिया Raydos: समीक्षा। "Psychics युद्ध" को 16 सिजन को सहभागी
दबाइ "Triphala": डाक्टर, contraindications र प्रभावकारिता को समीक्षा
यो लेप को क्रीम र जेल फरक छ: तुलनात्मक विशेषताहरु
भिसा आवेदन लागि पत्र प्रायोजित: यो के हो र कसरी यो लेख्न?